Hongwang igwe anaghị agba nchara | China emeputa nke oyi akpọrepu igwe anaghị agba nchara
Ụlọ ọrụ Hongwang
Ụlọ ọrụ FuJian
Ụlọ ọrụ ShanDong
Ụlọ ọrụ SiChuan
Ụlọ ọrụ YangJiang
Ụlọ ọrụ ZhaoQing
Anyị bụ ndị kasị asọmpi oyi-akpọrepu igwe anaghị agba nchara enterprise na china, anyị ụlọ ọrụ bụ ọkachamara igwe anaghị agba nchara mbubata na mbupụ trading n'elu ikpo okwu nke Hongwang Group tụnyere mba ahia, nchekwa, nhazi na mgbe-sales ọrụ.
Ọ na-arụ ọrụ dị mkpa maka ahịa mba ofesi nke ngwaahịa dị elu nke isi otu ụlọ ọrụ mebere.
ihe anyị nwere ike ime?
Ngwa anyị bụ isi igwe anaghị agba nchara na mpempe akwụkwọ nke 200, 300, 400, ngwụcha elu nke igwe na efere. Obosara na-ekpuchi 510-750mm, na 1240mm, na ọkpụrụkpụ dị n’agbata 0.28mm na 3.0mm. Emechara gụnyere NO.1, 2E, 2B, 2BB, BA, dull polish, 8K, mirror ti-gold, bilie ọla edo, ti-gold ojii, vibration, ọla kọpa, AFP, wdg. nye ahaziri 2BQ (ihe stampụ), 2BK (8K nhazi ihe) na ihe ndị ọzọ pụrụ iche. Companylọ ọrụ ahụ nwekwara ike ịbelata, nkwụsị, mkpuchi ihe nkiri na ịkwado ọrụ azụmahịa na mbubata na mbupụ.
Factory Direct Ebe 2003
Fast nzipu Oge
ọkachamara Sales Team
Dị iche iche ngwaahịa hongwang maka ịhọrọ gị
HL + Ochie
HL + Ọlaedo
Enyo + Gold
Laser igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
Ha nchara usoro igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
Mụta ozi ụlọ ọrụ ọhụụ na ntụzịaka
Onweghị ihe dị ka iji anya gị hụ nsonazụ ikpeazụ.